Wararkii ugu dambeeyey weerar ismiidaam ah oo lagu qaaday xarunta Degmada Warta-nabada. – Shabakadda Somalibile Media
Wararkii ugu dambeeyey weerar ismiidaam ah oo lagu qaaday xarunta Degmada Warta-nabada.
Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qarax ismiidaamin ah oo lagu qaaday xarunta Degmada Warta-Nabada ee magaalada Muqdisho.
Qof naftii halige ah ayaa gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa la beegsaday xarunta Degmada Warta-nabada, iyadoo qaraxaasi uu dhaliyey qasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo waliba burbur xoog leh.
Xiliga qaraxa uu dhacayay ayaa la sheegay in goobta ay ku sugnaayeen dad shacab ah oo loo qeybinayay raashin iyadoo laga cabsi qabo in qasaare badan uu geysto qaraxaasi oo ahaa mid xoogan jugtiisana laga maqlay xaafado fog fog.
Ciidamada dowladda ayaa qaraxa kadib xiray wadooyinka gala xarunta Degmada ee qaraxa lagu weeraray, gaadiidka gurmadka deg dega ah oo gaaray goobta ayaa qaaday dhaawacyo iyo meydadka dadkii ku waxyeeloobay weerarkaasi.
Ilaa iyo hadda lama oga halka la soo mariyey qaraxa lagu weeraray xaruntaasi iyadoo wadooyinka badi magaalada Muqdisho ay xiran yihiin, gawaariduna aad loo baaro.